Fitiliana faobe manerana ny nosy Inona no sakana tsy hanaovana azy ?
Raha ny zava-misy ankehitriny dia manomboka miha mafy ny ady: misy ny matin` ny Covid-19, mitombo isa ny faritra mihiboka,
miha-mafy ny tsikera ataon` ny olom-pirenena fa leo ny fihibohana noho ny fivelomana… Sao dia efa tokony hiditra any amin’ny fanaovana fitiliana faobe ny fanjakana ,ahafahana mamaritra ireo olona mitondra ny tsimok’aretina fa tsy mihonona fotsiny amin’ny fitilina vitsivitsy isan-andro eto. Efa maro ireo fanehoan-kevitra momba io fitiliana faobe toy ny antoko HVM mahakasika izy io. na ireo mpahay toekarena. Antony dia mba ahafahan’ ny ankamaroan’ny Malagasy salama manohy ny fiainany andavanandro. Efa tena mihatra aman’aina tanteraka mihitsy ny fahasahiranana amin’izao fotoana izao, nefa ilay fihibohana tsy voafehy ny fanjakana. Raha misy ny fitiliana faobe mantsy dia voafehy ireo faritra tena ahitàna ny aretina. Efa maro ireo fanehoan-kevitra momba io fitiliana faobe toa an`ny HVM izay nanambara fa “Tokony omena fiofanana sy fitaovana entiny miaro tena koa ny mpitsabo, mpianatra mpitsabo ary ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra isam-paritra. Tokony haparitaka amin'ny faritra 22 ireo fitaovana fitiliana haingana sady atomboka ny fitiliana faobe isam-pokontany. Tokony hatsangana isaky ny renivohim-paritany ny laboratoire d'analyse hahafahana manao fitiliana lalina na PCR”. Ny zava-mitranga amin` izao dia ny aretina miparitaka ihany, kanefa ny toekarena mikatso tanteraka. Ny fanampiana izay nomen’ny fanjakana vitsy ihany no misitraka izany, ary misy ny fanavakavahana nefa samy sahirana avokoa ny rehetra.